Hop043 iyo Hop067 oo berri lagu boobayo Dhuusamareeb | KEYDMEDIA ONLINE
Hop043 iyo Hop067 oo berri lagu boobayo Dhuusamareeb
Kursigaan oo buuq xooggan ka taagan yahay, ayaa loo xiray eedeysane Yaasiin Farey, kaas oo ka mid ah, shaqsiyaadka loo jabiyay xeerarka doorashada.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Gudiga Hirgalinta Doorashada Heer Galmudug, ayaa ku dhawaaqay in birri oo khamiis ah, 25 November 2021, labo kursi oo ka mid ah kuraasta Golaha Shacabka BJFS lagu dooranayo Dhuusamabeeb.
Kuraastan ayay sumaddoodu kala tahay HOP043, HOP067, ayaa laga leeyahay Ceelbuur iyo Ceeldheer, oo dhaca koofurta Gobolka Galgaduud.
Kurisiga HOP043, Waxaa Baarlamaankii 10-aad ku fadhiyay Xuseen Khaasim Yuusuf Iidow, oo u dhashay beesha Habar Idinle, Murusade,Hawiye, wuxuuna saaxiib dhow la yahay Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre.
Xuseen Iidoow, ayaa la filayaa inuu kursigaan ku soo laabto, wuxaana u xiray Qoorqoor, oo ma jiro musharrax la baratamaya.
Kusiga HOP067, Cabdullahi Cali Axmed [CADDOW CALI GEES], ayaa matalayay Baarlamaankii 10-aad, waxaana leh, beesha Waceysle Abgaal, Hawiye, Caddow, wuxuu u dhowyahay MW Xasan Sheekh, hayeeshee, sanadkaan kuma jiro musharixiinta kursiga.
“Boobka beri loo asteeyay kurisga 067 hadaan la joojin wuxuu u dhameynayaa rajadii laga lahaa guud ahaan doorashada Soomalia, gaar ahaan Doorashada Galmudug”. Ayuu yiri Tuuryare, oo ka mid ah musharixiinta kursiga.
Yuusuf Geelle Ugaas ayaa maanta ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay HOP026 ee golaha shacabka, kadib markii tartanka laga hor istaagay musharixiintii kale.
Sidoo kale, Mahad Cabdalla Cawad ayaa mar kale la soo siiyay kursiga tirsigiisu yahay Hop104, kaas oo musharixiintiisii xabsi guri lagu galiyay Dhuusamareeb.